Filankevitry ny minisitra ao Toliara : Hifantoka amin’ny fampandrosoana ny faritra Atsimo -
AccueilRaharaham-pirenenaFilankevitry ny minisitra ao Toliara : Hifantoka amin’ny fampandrosoana ny faritra Atsimo
Taorian’i Toamasina sy Antsiranana, anjaran’i Toliara indray ny mampiantrano ny filankevitry ny minisitra mivelatra. Araka ny fandaharam-potoana mantsy, ny alarobia izao no hanatanterahana izany ao amin’ny tranoben’ny Faritra Atsimo Andrefana ao Toliara ihany.
Anisan’ny lohahevitra goavana hiompanan’ity filankevitry ny minisitra izay tarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina any amin’ny faritra Atsimo ity ny fampandrosoana ny faritanin’i Toliara. Tafiditra indrindra amin’izany ny fametrahana fotodrafitrasa isan-tsokajiny sy isan-karazany ka hamorona asa ho an’ireo mponina any amin’iny faritra iny. Eo ihany koa ny fampandrosoana ara-toekarena, ny fametrahana lamina maty paika amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana rehetra, ny fanomezana rano fisotro madio, ny fanomezana sy fanatsarana ny herinaratra amin’ireo tanàna maro amin’ny ankapobeny ahafahana mampandroso ara-dalàna ny toekarena isam-paritra, ny lafiny fambolena sy fiompiana, sns.
Fa anisan’ny tena hifotoran’ny filankevitra ny mahakasika indrindra ny toekarena sy ny fandriampahaleman’ny faritra Atsimo ankoatra ireo pitsopitsony voalaza etsy ambony ireo.
Araka izany, tombony ho an’ny faritanin’i Toliara ny fandraisana ny filankevitry ny minisitra mivelatra. Tanjon’ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao rahateo ny fampitoviana tantana an’i Madagasikara iray manontolo sy fanatsarana ny fiainam-bahoaka ary ny tombontsoan’ny firenena.
Ankoatra izay, samy hahazo toromarika amin’ny fampandrosoana iny faritra Atsimo iny avokoa ireo minisitra rehetra amin’ity filankevitry ny minisitra mivelatra ao Toliara ity.